ZIMTA Inoti Nhengo Dzayo Hadzichakwanisa Kuramba Dzichienda Kumabasa
Mbudzi 07, 2019
Varairidzi muZimbabwe vari kunetsana nehurumende pamusoro pemari dzemihoro.
Rimwe sangano rinomirira varairidzi, re Zimbabwe Teachers Association (ZIMTA), rabatanawo nemamwe masangano evarairidzi pakuzivisa kuti nhengo dzaro hadzichakwanisa kuramba dzichienda kumabasa sezvo dzisisina mari dzekufambisa. Mutungamiri wesangano iri, VaRichard Gundani, vanoti nhengo dzavo dzichange dzichienda kumabasa kaviri chete pasvondo, Muvhuro neChishanu.
VaGundani vanoti danho ratorwa nesangano ravo rinotsinhira danho rakaziviswa nesangano rinomirira vashandi vehurumende, re APEX Council, rekuti vashandi vehurumende vakanga vasisakwanise kuramba vachienda kumabasa mazuva ose.
Asi mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko, VaEnergy Mutodi vakaudza Studio 7 neSvondo kuti hurumende yakasununguka kuramba ichiita hurukuro nevashandi vayo pamusoro pemihoro yavo.
Masangano anomiririra varairidzi, e Propgressive Teachers Union of Zimbabwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ndemamwe masangano evarairidzi akatozivisa kare kuti nhengo dzawo dzakanga dzisisakwanise kuramba dzichienda kumabasa.
Hurukuro naVaRichard Gundani
Zvichakadaro, sangano rinomiririra varairidzi vekumaruwa, re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, rinoti nhengo dzaro dzave kutangidza kuratidzira vhiki yega yega kusvika hurumende yagadzirisa zvichemo zvevarairidzi.
Mutungamiriri wesangano iri, VaObert Masaraure, vaudza Studio 7 kuti sangano ravo richatangidza kudzidzisa nekubatsira vana vechikoro pa nzvimbo dzavachazivisa asi kwete muzvikoro. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi re zvedzidzo kuti izvi zvichibvumidzwa here nemitemo yenyika.
Hurukuro naVaObert Masaraure
MDC yaVaChamisa Inobviswa paMuzinda weMorgan Tsvangirai House
Mapurisa Anosunga VaBiti neVamwe Vavo
VaBiti, Amai Karenyi Kore, VaChinoputsa neVamwe Vasungwa
Black Rhinos ne Cranborne Bullets Dzobuda muHarare
Kukwira kweMitengo yeMafuta eDzimotokari Kwotyirwa Kuti Kuchakwidzawo Mitengo yeZvakawanda